Kutheni urhwebo lwe-B2B olomeleleyo kuphela kweNdlela eya phambili kubaThengisi kunye nabaThumeli bePosti ye-COVID-19 | Martech Zone
Ubhubhane we-COVID-19 wenze amafu okungaqiniseki kubume beshishini kwaye kukhokelele ekucinyweni kwemisebenzi yezoqoqosho. Ngenxa yoko, amashishini anokungqina utshintsho lweparadigm kumxokelelwano wokubonelela, iimodeli zokusebenza, indlela yokuziphatha kwabathengi, kunye nokuthengwa kunye neendlela zokuthengisa.
Kubalulekile ukuthatha amanyathelo asebenzayo ukubeka ishishini lakho kwindawo ekhuselekileyo nokukhawulezisa inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ukomelela kweshishini kungahamba indlela ende ekuziqhelaniseni neemeko ezingalindelekanga kunye nokuqinisekisa uzinzo. Ngokukodwa kubadlali abakwivenkile yorhwebo ye-B2B, amaxesha angaqinisekiyo afana nala anokubonisa ikati eludongeni imeko. Unokujamelana nokuhla kweemarike okanye ufumane kunzima ukuhlangabezana nokunyuka kwemfuno. Ngelixa zombini ezi meko zinokubangela uxinzelelo ngokulinganayo, abavelisi kunye nabasasazi banokuxhomekeka ekuqhubekekeni kweshishini elifanelekileyo kunye nokomelela ukumelana nomceli mngeni kunye nokuqinisekisa ukubonelelwa okungathinteleki kubhubhane wolu bukhulu kunye nomlinganiselo.
Imeko yangoku inyanzelise amashishini ukuba enze iinguqu kulwakhiwo kwiindlela zabo zokuya kwintengiso. Nazi ezinye zeendawo eziphambili ekugxilwe kuzo ezinokukunceda uqinisekise ukuqhubeka kunye nokwakha umphambili owomeleleyo ngexesha lentlekele kwezempilo kule nkulungwane.
Ukuhlaziywa kweNtlekele - Amashishini kufuneka aqikelele ifuthe lobhubhane ekusebenzeni. Njengempendulo ekhawulezileyo, uninzi lwamashishini luseke amaziko eentambo zorhwebo kunye namaqela asebenza ngokunqamlezayo ukunciphisa ifuthe lobhubhane kwimisebenzi yokuthengisa. Baye benza uhlengahlengiso olufana nokuguquguquka kwekhredithi ukuxhasa amaqabane abo amajelo. Ngelixa la manyathelo anokunceda ukuhlangabezana neenjongo kwangoko, ukucwangciswa ngononophelo kunye nokwenza kubalulekile ekufumaneni ixesha elide.
Indlela yedijithali-yokuqala -Ukuthengisa kwe-B2B kunokwenzeka ukuba kutshintshwe ngokusisiseko kumaxesha eposti-ye-COVID-19 kugxilwe ekutshintsheni ukusuka ngaphandle kweintanethi ukuya kwiijelo ledijithali. Ubhubhane lubonelele ngamandla kwinkqubo eqhubekayo yokuthengiswa kwedijithali. Njengoko amashishini e-B2B abona kwangaphambili ukwanda okukhulu konxibelelwano lwedijithali kungekudala, kuya kufuneka ujonge kuyo yonke imisebenzi yokuthengisa ukuze uchonge amathuba anokubakho oomatshini bedijithali. Ukuphucula amava edijithali, qinisekisa ukuba abathengi banokufumana ulwazi olulungeleyo kwiwebhusayithi, kwaye bathelekise iimveliso kunye neenkonzo. Kuya kufuneka ulungise nayiphi na imiba yobuchwephesha ngexesha langempela kwaye ujonge iindlela ezintsha kunye neendlela ezintsha zokuphucula amava abathengi.
Ababoneleli baphinde bacinge ngomdlalo wabo - Ababoneleli abanikezela ngamava edijithali ethembekileyo kunye nawomntu ngokujolisa okwandayo kwisantya, ukungafihli nto, kunye nobungcali kunokwenzeka ukuba bachache ngokukhawuleza kwaye bakhule kubathengi babo. Kule nzame, kufuneka uphakamise itekhnoloji kwaye wazise izinto ezenzelwe abathengi ezinje ngeengxoxo eziphilayo ezinokunceda ukuqonda iimfuno ezithile kwaye uphendule ngokukhawuleza. Ukongeza kwintsebenzo kwiwebhusayithi, abathengisi balindele ukwanda kwetrafikhi kwii -apps zeselfowuni kunye noluntu lweendaba zosasazo. Ke, kwimeko yesiqhelo entsha, kuya kufuneka wenze utshintsho olukhulu kwisicwangciso-nkqubo sakho sentengiso ukuze ukwazi ukusebenzisa awona mathuba mhle kubume bendawo ebonakalayo.
I-eCommerce kunye neNtsebenziswano yeDijithali -Ingxaki yangoku inika ithuba lokwandisa i-eCommerce kunye nobuchule bedijithali. I-eCommerce kulindeleke ukuba idlale indima ebalulekileyo kwinqanaba lokufumana kwakhona nakwinqanaba elilandelayo lokukhula. Ukuba ishishini lakho linakho ukubanakho kwidijithali, ungaphulukana namathuba angapheliyo kubume be-Intanethi. Amashishini e-B2B asele etyale imali ekwakheni i-eCommerce kunye nentsebenziswano yedijithali ingajonga ukwenza imali kwi-footfall eyandayo ngokusebenzisa oonxibelelwano.
Ukuthengisa kude -Ukunciphisa impembelelo kwintengiso, uninzi lwamashishini e-B2B abone inguqu kwimodeli yentengiso ebonakalayo ngexesha lobhubhane. Ugxininiso ekuthengiseni okukude kunye nokunxibelelana ngevidiyo, iinkomfa, kunye neencoko zikhule kakhulu. Ngelixa amanye amashishini exhomekeke ngokupheleleyo kubalamlamli bokwenyani ukuba bathathe indawo yokuthengisa emasimini, abanye basebenzisa iingcali zabo zentengiso ngokubambisana nentengiso yewebhu. Uninzi lwamajelo afumanekayo ukuba alingane okanye asebenze ngakumbi ukufikelela kunye nokusebenzela abathengi. Ke, ukusetyenziswa kweendlela ezikude kunokwenzeka ukuba kunyuke nanjengoko kuthintelwa uhambo luthotywa kwaye abantu babuyela emsebenzini.
Enye indlela yokukhangela -Ukuphazanyiswa okukhulu kwikhonkco lonikezelo ngexesha le-Covid-19 kuye kwagxininisa isidingo samashishini sokuphumeza utshintsho kwisicwangciso sokuthenga. Ukuphazamiseka kwivenkile yonikezelo kuthintele ukufunyanwa kwezinto ezingezizo ezivela kubathengisi abanesivumelwano, ngakumbi kwimeko apho izinto ezingafunekiyo ziye zafunyanwa kwilizwe liphela. Ukoyisa lo mceli mngeni, amashishini kufuneka ajonge kubathengisi bendawo ukuze bathenge izinto ezingavuthiyo. Ukugcina ikhontrakthi kunye nabathengisi bendawo kunokunceda ukunqanda ukulibaziseka kwimveliso nakusasazo. Inokuba luncedo kweli nqanaba ukuchonga ezinye iimveliso kunye nezinto ezizezinye.
Ukucwangciswa kokuqhubeka kunye notyalo mali lwexesha elide -Ukuthengisa kwe-B2B, eli lixesha elifanelekileyo lokondla izikhokelo kunye nokwenza utyalomali lwexesha elide. Landela kwaye ugcine unxibelelwano rhoqo kunye nethemba kumbhobho kwaye umisele amathuba exesha elide. Bazise ngesicwangciso sakho sokuqulela okungekehli kunye namanyathelo oza kuwathatha ukuqinisekisa ukuqhubeka. Kuya kufuneka ngokuthe ngcembe ususe ugxininiso lwakho ukusuka kwimpendulo engxamisekileyo ukuya kwimodeli yexesha elide yokomelela kokusebenza. Kule nkqubo, zibandakanye kwisicwangciso sokuqhubekeka esomeleleyo ukuze ufunde izifundo kule ngxaki ikhoyo ngoku. Kuya kufuneka uphinde uvavanye umngcipheko wokusebenza kwimisebenzi ebalulekileyo yeshishini kunye nokuziqhelanisa nokuzilolonga kwimeko. Ukuphuhlisa amandla okomelela kunokunceda ukujongana nemicimbi engazange ibonwe kwaye ubuyele kwimeko yokuqala yeshishini ngaphandle kwefuthe elibi kwimisebenzi.
Chaza iNdima eNtsha yeeNtengiso zeNtengiso -Utshintsho olwenziwe kwidijithali aluchaphazeli indima yabathengisi abathe bafuneka ngoku ukuba baqhelane nezixhobo zedijithali ezinje nge-Zoom, Skype kunye neWebex. Abaqeqeshi bezentengiso abasebenza kwindawo ye-B2B kufuneka baqonde izixhobo ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi ukujongana nokuphendula imibuzo yabathengi ngokufanelekileyo. Njengoko ulungiselela ukwanda kwintengiso yedijithali, qonda indlela efanelekileyo yokuqeqesha kunye nokuhambisa iingcali zentengiso kwiindlela ezininzi ukubonelela ngenkonzo yabathengi kunye nenkxaso. Uqeqesho kunye notyalo mali kubasebenzi bakho ngokuqinisekileyo baya kuvuna umvuzo kwixesha elide.
Sukulinda Ukuba Ubhubhane Uphele
Iingcali zicebisa ukuba i-coronavirus ihlale nathi ixesha elide kwaye iqhubeke nokusasazeka de kuphuculwe isitofu sokuyiphelisa. Njengokuba imibutho ijonge ukwakha ngokutsha kwaye iqale imisebenzi yabo ngabasebenzi abancinci kunye nezilumkiso eziyimfuneko, kunyanzelekile ukulungelelanisa yonke imisebenzi neemfuno ezintsha.
Amashishini kufuneka amkele indlela esebenzayo kwaye alandele isicwangciso esimiselweyo sokuqhubeka kokusebenza kunye nokuthintela ukuphazamiseka kwempahla. Gcina uluhlu olulungeleyo kwaye uzilungiselele kwangaphambili ukuze ungaphoswa lithuba lokuthengisa. Njengokubuyiselwa kwezoqoqosho kumaxesha epost-COVID-19 anokukhawuleza kunokuba bekulindelwe, kuya kufuneka usebenzise eli xesha ukulungiselela imfuno yokupasa. Khumbula, ukuba awuqali ngoku, ngekhe ube nakho ukusebenzisa amathuba avelayo ngexesha elililo.
tags: enye indlela yokufumanab2b yorhweboI-b2b yorhwebob2b ukuthengisaukuqhubeka nokucwangciswai-covid-19intsebenziswano yedijithaliindlela yedijithali-yokuqalaUkuvuselelwa kwentlekeleintsebenziswano ye-ecommerceukuvuselela uqoqoshoLweencwadizokusetyenziswaUtyalomali lwexesha elideabenzibhubhaneUkubuyiselaukuthengisa kudeababoneleli